1953-1967 Evinrude Johnson 3HP Litetwin Ducktwin Tune-UP ny paika | Outboard Boat Motor Repair
Ento ary Fishing!
1953-1967 Evinrude Johnson 3HP Litetwin Ducktwin Tune-UP ny paika
Ny maotera fa ity tetikasa ity dia Model 3303S serial B 18010.
Ity no maodely modely nomen'ny Raibeko fony aho mbola kely. Nanana fahatsiarovana mahafinaritra maro momba ity motera ity aho ary naniry ny hamerenany an-taonany maro. Ary farany, nisy namana nanome ahy ity motera ity satria efa antitra loatra izy ka tsy afaka mampiasa azy. Fantany tamin'ny fihetsika nataoko tamin'izaho vao hitako fa hanamboatra azy io, mba hihazakazaka tsara sy hampiasana azy tsara. Ity motera ity dia notehirizina tamin'ny lasantsy mbola tao anaty tanky nandritra ny roa na telo taona. Azoko atao mihitsy ny mampiditra azy io amin'ny fiainana, na dia miaraka amin'ny entona taloha aza, saingy tsapako fa mila fanitsiana tsara izany. Mamoaka gazy avy amin'ny carburetor koa io. Mino aho fa rehefa vitako ny manamboatra an'ity motera ity dia hihazakazaka toy ny taloha ihany izy io. Afaka mividy an'ireny motera ireny ianao $ 150 ka hatramin'ny $ 200 amin'ny e-Bay. Raha vonona ny hividy $ 100 amin'ny ampahany ianao dia azonao atao ny manamboatra azy io ary mampandeha azy toy ny vaovao. Raha tsy misy ny fizarana ho an'ny tononkira dia tsy hihazakazaka mihitsy izy io noho ny antony hotantaraiko rehefa manoratra ity fomba ity aho.
Ny manampy ny olona ao amin'ny Mitsangantsangana iboats.com sehatra fiadian-kevitra nanome ireto fampahalalana manaraka ireto momba izany maotera.
Evinrude modely 3302:
Fantatro RPMS: 4000
Fifindran: 5.28 cu.in. = 86.5 CCM
Weight: 34 lbs. = 15.4 Kg
Gear tahan'ny: 17: 28
Kilalaon'afo Plugs: Tompon-daka J6C gapped amin'ny .030 "(J6J tsy hita intsony)
Ambany tarika menaka: OMC / BRP 'HiVis' na mitovy 80 / 90W outboard gearcase menaka avy amin'ny Walmart, etc.
Solika / Oil Mix: 24: 1 87 octane mandatsa-dranomaso ny TC-W3 outboard menaka (manadino momba ny SAE 30w).
Time hanomboka - Raha manana lasantsy ao anaty tank ianao dia azonao atao ny mandroso ary manandrana manomboka ny moto. Tsy misy teboka firy amin'izany afa-tsy ny fahatsapana ny zavatra nihatsara rehefa vita ianao. Alohan'ny hanombohanao azy dia apetaho ao anaty fitoeram-pako feno rano ilay faritra ambany. Mariho tsara ny famadihan'ny motera ary raha miasa ny starter recoil. Mariho ihany koa raha toa ny môtô toa misy famatrarana tsara. Diniho ny tady ary tantano mba hahitana raha mila soloina izy ireo.
Rehefa esoriko ity motera ity dia mikasa ny hanadio izay rehetra azoko atao amin'ny lamba sy mpanadio spray aho. Betsaka ny mpanadio manokana azo ampiasaina amin'izany, fa tsotra fotsiny no ampiasaiko mpanadio tokantrano hitako tao ambanin'ilay fantsakana. Antenaiko fa haveriko io alohan'ny hahitan'ny vadiko azy tsy hita. Mikasa ny hitazona ireo faritra ireo ihany koa aho rehefa manavaka azy ireo.
Esory ny Motor hita ao - KITIHO ETO ho an'ny antsipirihany.
Ny faritra lehibe isika fa hifantoka amin'ny dia Powerhead, Fuel / Carburetor, Ignition, Impeller sy Ambany Unit Lubricant.
Power Head - Alohan'ny hanapahanao hevitra amin'ny fampifanarahana ny môtônanao dia tianao ho azo antoka fa hivadika ilay motera ary manana famatrarana miaraka amin'ireo varingarina roa ianao. Raha tsy hivily ny motera amin'ny alàlan'ny famadihana ilay flywheel na toa tsy misy famatrarana azy dia mila mihoatra ny famolavolana tsotra ny moterao. Tsy maintsy manapa-kevitra ianao hoe hatraiza ny fanirianao hanamboatra ny môtô sy ny halaviran'ny fahaizanao mekanika anao. Mora ny manao feo. Ny famotsorana piston sy famerenana amin'ny laoniny ny famatrarana dia bebe kokoa amin'ny ambaratongam-pahasarotana sy mihoatra ny sahan'ity lahatsoratra ity. Tsy te hilaza aho fa ny motera dia tsy azo amboarina na tsy mendrika hamboarina fa amin'ny motera izay ampiasaiko amin'ity lahatsoratra ity dia tsy ilaina izany. Ao amin'ny lahatsoratra iray hafa dia tsy maintsy navotsako ireo piston tamin'ny motera Johnson 15 HP ary nomeko fiainana vaovao izany. Afaka mahazo refy mifehezana ianao any amin'ny fivarotana kojakoja misy anao eo an-toerana sahabo amin'ny $ 20 na $ 30.
Azonao atao ny manolo ny tady fanombohana sy ilay mpitan-tady fanombohana. Azo atao koa ny manolo ny lohataona recoil starter raha ilaina. Ireo faritra rehetra ireo dia misy ihany fa tsy nilaina tamin'ity tetikasa ity.
Carburetor - Amin'ny fotoana rehetra ianao efa ela izay nipetraka manodidina maotera nandritra ny fotoana kelikely, dia afaka mihevitra fa mila ny carburetor fanompoana. Gas, indrindra rehefa voaharo diloilo, dia nitodika tany varnish na raha tsy izany hihy ambony ny carburetor. Na dia maro carburetor fanadiovana additives fa afaka nataony tao ny solika Mitifitra tanky, na mivantana any an-carburetor, dia tsy ho tonga akaikin'ny fanatanterahana ny zavatra mitovy tamin'izany carburetor miray feo-up. Na dia ny maotera solika dia tsy voatahiry ao amin'ny carburetor, ny gaskets mety maina avy sy mampitresaka na simba haingana Rehefa miezaka ny mampiasa izany indray. Ny hany fomba mba hahazoana antoka ny carburetor no handeha hiasa tsara dia ny hanala, disassemble, madio, ary manambatra amin'ny faritra vaovao, hanoloana, ary hanao fanitsiana izay ny dingana amin'ny fanatanterahana ny carburetor miray feo-up. KITIHO ETO ho an'ny antsipirihany sary sy ny fomba fiasa noho ny manatanteraka ny carburetor miray feo-ny noho izany maotera.
Ignition System - Ankoatra ny pitik'afo plugs sy ny plug tariby, ignition rehetra ny rafitra no misy ambanin'ny flywheel. Ny karazana magneto ignition izany maotera no Flywheel Magneto amin'ny mpandika Points. Ny asa ny ignition rafitra dia ny hiteraka ampy Zintin'aratra (Manodidina 20,000 volts) mba hitsambikina ny gap ny kilalaon'afo plugs famoronana sy ny kilalaon'afo ary mampirehitra ny solika / rivotra fifangaroana, ary mba hahazoana antoka fa malefaka Fa raha atolotra ny pitik'afo plug amin'ny marina ny zo fotoana KITIHO ETO ho an'ny antsipirihany sary sy ny fomba fiasa noho ny manatanteraka ny ignition rafitra miray feo-up noho izany maotera.
Impeller sy Lower Unit -
Tank Testing - Na dia tsy mitovy tanteraka ny fitiliana tanky, izaho no mameno ny 55-gallon barika, nahantona ny maotera eo amin'ny sisiny sy ny afo izany. Tsy te-hihazakazaka ny maotera avy ao anaty rano mihitsy, ary tsy misy fomba tsara hametraka sofina maotera muffs ity, noho izany dia tsy maintsy ho sedraina na amin'ny sambo ao amin'ny vatana ny rano na ny tanky. Faly aho aho Tsy nanandrana izany avy amin'ny farihy, satria ny maotera no manana olana sasany izay nila niteny. Hay tsy rano fa mivezivezy manodidina ny cylinders satria mety hahazo ny maotera mafana rehefa afaka iray minitra ny nihazakazaka ary tsy maintsy hanidy eo anatrehan'i dia mety ho simba. Zavatra tsy overheating olana dia tsy miharihary avy hatrany dia tifitra rano, satria avy tamin'ny fivoahan'ny kely seranan-tsambo ao amin'ny vondrona ambany. Rehefa ahiahiana fa ny maotera no nihazakazaka mafana, dia ny famafazana rano eo amin'ny Varingarin'i lohany, ary avy hatrany dia nanomboka ny sizzle ka dia niverina ho etona. Nidika izany fa teo amin'ny lohany raha kely indrindra 212 maripana Fahrenheit raha tokony ho teo amin'ny manodidina ny 150 maripana Fahrenheit rehefa nihazakazaka. Raha diso fanantenana, faly aho fa nanana ny fahendrena aho mba hanidy ny maotera nidina ka aoka hihamangatsiaka alohan'ny miezaka ny hanomboka sy mihazakazaka izany indray izany indray.
Overheating manamboatra ny olana amin'ny hihena System - Up ho io hevitra io, dia tsy nijanona ny Varingarin'i-doha noho ny maotera, ary dia hivily ny toa tsara famatrarana. Noho ny maotera overheating, dia hita fa tsy maintsy handalinana ny mahita ny antony tsy mivezivezy ny rano amin'ny alalan'ny herin'ny lohany. tsindrio Eto ny mamaky ny momba ny tsipiriany ny fomba ity.
More Tank Testing - Rehefa mandeha indray sy manamboatra ny olana amin'ny rafitra hihena, tonga ny fotoana hanaovana fitiliana indray tanky sasany. Ny tanky nahitana tsotra gallon 55-barika. Ny fanamboarana ny fivarotana hanana fiara mifono vy be fitsapana lehibe kokoa. Izy ireo ihany koa no fitaovana fitsapana mba hametraka ny enta-mavesatra teo amin'ny maotera fa tsy mba nivily ny rano be loatra. Koa satria izany no maotera kely, aho, dia mialoha ka nandao ny hevi-dehibe ao amin'ny ary nitifitra ny maotera ao anaty rano barika. Ny voalohany dia ny fiahiana ny maotera hahitana raha mety overheat sy ny fanampiana, dia tsy nanao izany. Tamin'ny voalohany, ilay maotera dia toa tsy mihazakazaka araka ny coughed tsy tapaka sy sputtered ary namorona rahona lehibe ny setroka manga. Avy eo aho dia tonga saina fa na dia nanadio ny entona tanky, nisy angamba ny sasany mahazo poti any an-carburetor. Rehefa mandeha ny maotera nandritra ny fotoana kelikely, dia nisintona ny vilia baolina sy ny ambany carburetor-haingana fiaramanidina sy nanadio azy ireo. Namerina ity dingana ity aho imbetsaka. Toa ny hovitrovitra ny maotera hazakazaka dia mandondòna ny crud mahamenatra rehetra. Izany maotera tsy mbola mihazakazaka eo amin'ny tany, fara fahakeliny, 10 na 12 taona ka nisy maro crud ny fiara sy ny solika andalana. Dia nanana nofy ny maotera nanomboka tamin'ny andro voalohany ka nihazakazaka fitaomana tsara araka ny feon-kiran'ny niakatra, fa raha ny marina, dia tsy maintsy hihazakazaka mandritra ny fotoana fohy teo anoloany izy no hanomboka hanao zavatra toy ny sambo tsara maotera indray. Ny nihazakazaka intsony ny maotera, ny tsara kokoa dia toa ny hanao toy ny hoe dia efa tapaka tao. A 55-gallon barika dia tsy tena tsara ho an'ny fitiliana, satria ny maotera dia hahatonga tena ny renirano rehefa mihazakazaka haingana. Koa, ny onja ao anaty rano nahatonga ny maotera mba hanafainganana sy moramora. I Niezaka ny hanitsy ny carburetor ary manao ny moto foana, fa izany no tsara atao amin'ny farihy any ho any. I nihazakazaka roa fiara mifono vy ny solika ny alalan 'ny maotera, ary ankapobeny aoka mipetraka ao, ary mihazakazaka ho 3 na 4 ora raha mbola nanadio ny faritra ny asako. Aho saina fa ny maotera tsy ho nihazakazaka tsara ny fiara fa dia toky ny namana iray fa ny maotera no hitondra tena Tsara kokoa indray mandeha teo amin'ny sambokely sy amin'ny misokatra vatana ny rano, ary tahaka ny Hay, izy marina . Rehefa tonga teny amin'ny teboka farany izay afaka miala amin'ny farihy izany maotera, tena faly aho ny fomba nahatanteraka izany. Efa nanana maotera avy izany im-betsaka izao ka nihazakazaka lehibe. I mahazo be dia be ny teny fiderana avy amin'ny olona izay mankafy ity 42 taona maotera izay nitondra valiny ho any amin'ny fiainana. Tsy andriko izay miasa amin'ny ary nanoratra momba Motors kokoa amin'ny ho avy.
Raiso ny Motor Fishing - I Febroary 27, 2009, any Indiana fotsiny aho fa tsy afaka miandry. Noraisiko ny Evinrude Lightwin ny Sokatra Creek fitahirizana atsimo fotsiny ny Tere Haute Indiana mba hizaha toetra azy. Sokatra Creek fitahirizana dia faly iray arintany-voaroaka hery niteraka fototra. Vakio ny manaraka lahatsoratra mba hahitana ny fomba fanjonoana ny nandeha lavitra sy ny fomba nihazakazaka ny maotera.
Nankafy ny Motor - Ankehitriny rehefa ampiarahiko sy mandeha tsara ity motera ity dia nankafiziko. 10 Mey izao ary efa navoakako in-4 na in-5 ity motera ity. Isaky ny ampiasako azy io dia toa miha mahomby kokoa. Ny faran'ny herinandro lasa teo, tamin'ny Fetin'ny Reny, dia nanao fivoriambe tao amin'ny toeran'ny rahavaviko ny fianakavianay, izay eo amin'ny farihy milanja iray. Nentiko niaraka ny sambo kely fanjonoako izay 15 'Gheene Classic. Ity sambo ity dia toy ny lakana fiberglass lehibe kokoa miaraka amina square square ho an'ny motera sambo. Nahavita HP 25 hatrany aho tamin'ity sambo ity saingy napetrako teo ilay HP kely 3 Evinrude Lightwin niaraka tamin'ny hevitra hampianarana ny zanako lahy 8 taona sy ny zanak'olo-mpianadahy 9 taona hitantana ilay zavatra. Taorian'ny fanondroana vitsivitsy dia navadiko ireo zazalahy ary nihazakazaka eraky ny farihy izy ireo mandra-pahafatin'ny fony. Nijery azy ireo tao anaty sambo hafa sy ilay moto HP 25 aho fa nanao tsara samirery ireo zazalahy. Miaraka amin'ireo zazalahy kely ihany ao anaty sambo ary ankehitriny koa ny maro hafa, dia nifindra tamin'ny 8 MPH teo ho eo ny sambo. Afaka nanangana ny maotera mihitsy aza ry zareo. Ny motera dia azo itokisana ary aorian'ny fanombohana voalohany dia hiverina amin'ny fotoana rehetra amin'ny fisintomana voalohany. Faly be aho amin'ity motera kely ity izay hanome taonan'ny fampiasana sy fahatsiarovana an-taonany maro. Mikasa ny hitondra azy io ho tahiry kely aho na zavatra ho an'ny ankizilahy milalao miaraka amin'ny dia manjono any Canada any amin'ity volana ity. Fotoana izao hampitodihana ny saiko amin'ireo motera hafa ananako eto izay mila amboarina sy hosoratana.
Nanjono any Kanada